Insert yakasikwa kubatsira vashambadziri uye varidzi veapp kuti vakunde nguva inotora zano rine chekuita nezveapp kuti ubve pahodhi kuchena kune chishandiso chemushandisi. Iyo puratifomu inopa yakafara seti yezvinofanira-kuve nezvimiro - inowedzera - iyo inogona kuburitswa mune chero iOS uye Android live app mumaminetsi, pasina kuedza kwekuvandudza. Kuisa zvinhu zvakagara zvakavakwa uye zvishandiso zveboardboard, kutaurirana, kushandurwa, kuwanikwa kwevashandisi, kuchinjiswa kweUI uye mamwe maitiro ekubatana.
Varidzi veapp vanofunga mazano anoshamisa ekukudziridza kwavo kubatanidzwa - nharaunda dzakakosha sezvo nhare inova chiteshi chepamusoro chebhizimusi. Asi ipapo ivo vanorovera pamadziro - nharembozha yekuvandudza mamirioni marefu, uye mazhinji eaya makuru mazano ekutengesa anorasika mukuita kana kutora nguva refu kuti aite. Insert Muvambi uye CEO Shahar Kaminitz
Insert yakasarudzika auto-yekutsvaga tekinoroji inodzidza chimiro cheapp, chaiyo-nguva mamiriro uye dhijitari mutauro wemushandisi Iyo browser-based edhitaira ipapo inobvumidza vashambadzi kuisa maficha uye maturusi, kutsanangura vateereri, kugadzira zvinokonzeresa, uye kuona mamiriro ezvinhu avanoitwa, ese asina kukodha.
Kuisa kunotanga nekufungidzira pane izvo zvinogona kuvandudza kubatanidzwa kana kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvebhizinesi rako.
Iyo puratifomu inoita kuti iwe utsanangure A / B yekuyera parameter uye kuendesa iwo iwo maoneti ayo anokurega iwe kuti uvhare iyo loop pane yako hypothesis uye nekuwedzera kugadzirisa mhedzisiro.
Insert yakagadzirira bhizinesi, iine yekutanga-mwero yekuchengetedza maficha pamwe nekuvimbiswa kwemhando yepamusoro, mvumo uye maitiro ekudzokorora akavakirwa papuratifomu. Iyo Insert Platform inogona zvakare kusanganiswa neyakajairika zvemukati manejimendi, analytics, kushambadzira otomatiki masystem uye nezvimwe.
Tags: insert.ioMobile Anwendungnharembozha app kubatanidzwaMobile Apps